पुरुष अझ बोल्नुपर्छ- विचार - कान्तिपुर समाचार
आश्विन ३०, २०७६ बिन्दा पाण्डे
२०७६ असोज १३ गते एउटा अकल्पनीय घटनाको समाचार बाहिरियो— राज्य संरचनाको उच्च मर्यादा तथा संसदको सर्वोच्च पदमा रहेका सभामुखबाट संसद सचिवालयकै एक कर्मचारीमाथि हातपात र जबर्जस्ती करणीको प्रयास । पहिलो पटक यस्तो समाचार सञ्चार माध्यममा आउँदा सबै स्तब्ध भए । एउटा सांसदको रूपमा म पनि ।
सभामुखको नम्र बोली, शालिन व्यक्तित्व र सहज व्यवहार दिमागमा चलचित्रझैं घुम्न थाल्यो । गतवर्ष संसदमा भएको महिला विरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलको याद आयो । विविध व्यवधानका बावजुद उक्त प्रस्तावमा छलफल गराउनुपर्ने पक्षमा सभामुख सधैं सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तो व्यक्तिबाट यस्तो घटना (?) कसरी सम्भव हुनसक्छ भन्ने कुरा मन–मस्तिष्कमा खेल्दै थियो । तर जब घटनाबारे थप विवरणहरू खुल्दै गए, त्यससंँग जोडिएकै कारण भोलिपल्ट सभामुखले पदबाट राजीनामा दिएको खबर आयो । अनि त घटना घटेको कुरा पत्याउनुको विकल्प रहेन । अनि मस्तिष्कले भन्यो, व्यक्ति जतिसुकै असल, शालिन र भद्र भए पनि आखिर मानिस हो । मानिसमा दमित रूपमा रहने कुनै पनि कमजोरीको अंशलाई जब समय र परिस्थितिले उद्वेलित गराइदिन्छ, असोचनीय र अकल्पनीय घटना घट्ने सम्भावना सधैं रहन्छ । यो पनि त्यस्तै हुनगयो होला । बाँकी कुरा अनुसन्धानको घेरामा पुगेकाले घटनासँग सम्बन्धित तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिन हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनु र त्यसबाट आउने नतिजा स्वीकार्नुको अर्को विकल्प रहेन । अबको खबरदारी भनेको कानुन अनुसार पीडकले सजाय र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने नै हो ।
यसक्रममा नयाँ संविधानले मौलिक हकको रूपमा पहिलोपटक व्यवस्था गरेको अपराध पीडितको हक (धारा २१) को कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । उक्त धारामा भनिएको छ, (१) अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ । (२) अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुन:स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ । यी प्रावधानलाई ध्यान दिएर हेर्दा यहाँ दुइटा विषय उल्लेख गर्न आवश्यक देखिन्छ । पहिलो पीडित पक्षको स्वास्थ्य अवस्था र सुरक्षा अनि दोस्रो, राजनीतिकर्मी खासगरी महिला सांसदमाथि उठाइएको प्रश्न ।
घटना भएको दिनबाट अहिलेसम्म पीडितको नामबाट फरक–फरक किसिमका वक्तव्यहरू सञ्चार माध्यममा आएका छन् । अनि उनलाई ‘डिप्रेसन’को औषधि सेवकको रूपमा उल्लेख गर्दै यस घटनालाई पीडितको स्वास्थ्य अवस्थासँग जोडेर पनि व्याख्या गर्न थालिएको छ । तर बिरामी भएकैले उनीमाथिको हिंसा क्षम्य हुनुपर्छ भन्ने तर्क हो भने त्यो कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । अस्वस्थ व्यक्तिमाथि घटेको यो घटना प्रमाणित भएमा अझ जघन्य हुनसक्छ ।
साथै पीडितको स्वास्थ्य अवस्था बारेमा सार्वजनिक रूपमा समेत प्रश्न उठिसकेपछि उनको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारमा राज्यले चासो देखाउनुपर्छ । आधारभूत उपचार पाउनु हरेक नागरिकको मौलिक हक हो । अझ यस किसिमको गम्भीर आरोपसँग जोडिएकी पीडितको हकमा राज्य थप संवेदनशील हुनुपर्छ । मेडिकल उपचार मात्र होइन, उनलाई मनोसामाजिक परामर्श समेतको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अनि यस विषयमा सञ्चार जगतले पनि पीडितमैत्री भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक हुँदैन र ? आरोपित पक्षको स्वास्थ्य उपचार र अवस्थाबारे दिनदिनै जस्तो जानकारी गराउने सञ्चार माध्यमहरूले बिरामी भनिएकी पीडित पक्षको स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार र स्वास्थ्य अवस्था बारेमा उचित जानकारी गराएको पाइँदैन ।
जहाँसम्म यस्तो जघन्य हिंसा बारेमा महिला सांसद, राजनीतिकर्मी र अधिकारकर्मी किन मौन भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ, यसले पंक्तिकारको ध्यानाकृष्ट गरेको छ । सामान्य रूपमा हेर्दा यो प्रश्न जायज हो । यस्ता घटनामा महिलाहरू बोल्नैपर्छ । यस घटनामा बोलिएका कुरा पर्याप्त भएन पनि होला । तर मेरो मनमा आएको प्रश्नचाहिँ के हो भने यस्तो विषयमा पुरुष सांसद, राजनीतिकर्मी, अधिकारकर्मीचाहिँ बोल्नु पर्दैन ? अथवा उनीहरू किन बोलेनन् वा बोल्दैनन् भन्ने प्रश्न उठाउन जरुरी छैन ? यस्ता विषयमा पनि ‘जेन्डर विशेष’ले मात्र बोल्नुपर्ने हो ? कि एकजना पुरुष आरोपित हुँदा सबै पुरुष (?) आरोपित पक्ष नै हुन् र उनीहरूले बोल्न पर्दैन वा हुँदैन भन्न मिल्छ ? त्यस्तो सोचिएको हो भने न्यायका पक्षमा भएका सबै पुरुषमाथि अन्याय हुँदैन र ! यसर्थ मेरो भनाइ केमात्र हो भने महिला पीडित पक्ष भएकोले महिलाले बोल्नैपर्छ । तर पुरुष पनि यस्ता विषयमा बोल्नुपर्छ । अझ त्यति उच्च पदमा भएको व्यक्तिमाथि लागेको आरोपबारे पुरुष झनै बोल्नुपर्छ । हाम्रो समाजको चरित्र पितृसत्तात्मक रहेको र हरेक निकायको निर्णायक पदमा पुरुष नै भएका कारण पनि यस्ता घटना फेरि नदोहोरियोस् भन्नका लागि पनि पुरुषहरू बोल्नुपर्छ । अझ निर्णायक तहमा रहेका पुरुषहरू थप बोल्नुपर्छ । सबैले उनीहरूको धारणा माग गर्नुपर्छ ?
अब व्यक्तिगत रूपमा केही कुरा गरौं । जुन समयमा घटना घट्यो, म बाहिर थिएँ । काठमाडौं आइसकेपछि हामीले पीडित पक्षको अवस्था बुझ्दा लागेकै हो, घटनाको सत्य–तथ्य अनुसन्धानको दायरामा रहेको प्रक्रियामा अगाडि आउनेछ । पीडित पक्षको तत्कालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता स्वास्थ्य उपचार र सुरक्षाको थियो/हो । यस सम्बन्धमा सुरक्षा निकायदेखि राज्यका सम्बन्धित निकायलाई खबर गराइयो । तर अहिलेसम्म के गरियो भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छैन । यो घटना उच्च ओहदासँंग जोडिएको कारण यसबारे आम नागरिकलाई जानकारी हुनुपर्थ्यो/पर्छ ।
पीडित पक्षबाट बारम्बार फेरिएका ‘स्टेटमेन्ट’ आइरहँदा उनीमाथि दबाब छ भन्ने भाव आमरूपमा परेको छ । त्यो दबाब पनि हुनसक्छ । अथवा उनको स्वास्थ्य अवस्था, विचलित मनोभाव वा एकान्तपनको उपज पनि हुनसक्छ । अनुसन्धानको दायरामा रहेको व्यक्ति भएको कारण यसको तथ्यगत जानकारी राख्ने दायित्व राज्यकै हो ।
यस सन्दर्भमा संवैधानिक रूपमा रहेको पीडितको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि डिप्रेसनको बिरामी भनिएकी पीडितलाई विशेषज्ञसित स्वास्थ्य परीक्षण गराई आवश्यक मनोसामाजिक परामर्ष उपलव्ध गराउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । पीडितका रूपमा उनले मानवीय र कानुनी रूपमा पाउने हक उपलब्ध गराउन आफू प्रतिबद्ध भएको सन्देश दिन राज्यले पहल लिनैपर्छ । र यो आमचासोको घटना भएकोले पीडितको स्वास्थ्य अवस्था अद्यावधिक गर्ने काम पनि गरिन जरुरी छ ।
अर्को सवाल पीडितको सुरक्षासित जोडिएको छ । लामो राजनीतिक जीवन र उच्च ओहदा भएको व्यक्तिमा त आपराधिक सोच आउन सक्छ र घटना हुनसक्छ भन्ने आधारमा राज्य अनुसन्धानमा लागेको छ भने पीडित पक्ष, जसलाई डिप्रेसन भएको भनिएको छ, सबै पक्षबाट संवेदनशील भई उनको सुरक्षा गरिनुपर्छ । कदाचित केही कारणले उनको जीवन तलमाथि भयो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? परिवारका सदस्यले वा सुरक्षाको नाममा सडकमा प्रहरी तैनाथ गर्ने राज्यले ? अनि अदालतमा बयान दिन पीडितको उजुरी आवश्यक छ भन्ने निकायले ? भोलि कुनै दुर्घटना भयो र बयानका लागि पीडितको उपस्थिति नरहने अवस्था आइपर्‍यो भने अनुसन्धानमा यसको असर के हुन्छ ? निर्णय कसरी गरिन्छ ? परिणाम कसको पक्षमा हुन्छ ? यसतर्फ समयमै सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानुपर्छ । र सम्बन्धित सबै घटना र उजागर हुनसक्ने तमाम प्रश्नको जवाफ राज्यसँग हुनुपर्छ ।
प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ ०७:५२